Kenya oo duqeyn cirka ku qaaday gobolka Jubada Dhexe – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Diyaaradaha dagaalka dalka Kenya ayaa maanta mar kale deegaan ka tirsan gobolka Jubada Dhexe. Duqeynta maanta ayaa laloa beegsaday deegaanka Hargeysa-yarey oo ku dhow degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe, iyadoo duqeyntan ay ka mid tahay kuwo labadii maalmood ee lasoo dhaafay ay Kenya ka geysanaysay gudaha Soomaaliya.
Goobjoogayaal ayaa laga soo xigtay inay maqlayeen madaafiic xooggan oo ku dhacaysa nawaaxiga deegaanka Hargeysa-yarey, balse lama oga illaa iyo hadda khasaaraha ay duqeyntaas geysatay.
Gobolka Jubbada Dhexe ayaa ah gobolka keliya ay Al-shabaab gacanta ku hayso gobollada Soomaaliya oo dhan, iyadoo dhawaan ay dowladda Kenya sheegtay inay dishay ugu yaraan 100 dagaalyahan oo Al-shabaab ka tirsan, balse ururkaas ayaa beenisay warkaas.
Dowladda Kenya ayaa sheegtay iney weerarada ay la beegsaneyso gudaha Soomaaliya ay ugu aareyso dadkii sabtidii lasoo dhaafay Alshabaab ku laayeen bas ka baxay Mandheera kuna sii jeeday Nairobi.
Illaa hadda ma jiro hadal kasoo baxay Al-shabaab oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay duqeyntan, inkastoo dadka deegaannadaas ku nool ay sheegeen inay maqleen madaafiic ku dhacaysa deegaanka Hargeyso-yare.
Warar shalay soo baxay ayaa shegayay in diyaaradaha dagaalka Kenya labadii maalmood ee lasoo dhaafay dileen tiro badan oo reer guuraa ah, kuwaasoo ku noolaa Jubooyinka.
Golaha Amaanka oo si wadajir ah u cambaareeyey weerarkii Mandheera